Fentanyl: औषधि 50 समय लागु पदार्थ भन्दा ज्यादा पोटेंट - समाचार नियम
Fentanyl: औषधि 50 समय लागु पदार्थ भन्दा ज्यादा पोटेंट
को 69 घातक अधिमात्रा सिकार गत वर्ष, 68% सिंथेटिक opioid लिएका थिए, जो मेक्सिकन cartels बनाउन सिकें र अंतरराज्यीय राजमार्गहरू गर्न लुकाएर लैजानु छ. दबाइ 'हाम्रो नागरिक मारिरहेको छ के छ,'म्यान्चेस्टर गरेको प्रहरी प्रमुख भन्छन्
शीर्षक यो लेख “Fentanyl: औषधि 50 लागु पदार्थ ravages न्यू हैम्पशायर भन्दा पटक थप शक्तिशाली” म्यान्चेस्टर मा सुजन Zalkind द्वारा लेखिएको थियो, नयाँ हैम्पशायर, बिहीबार 4th फरवरी मा theguardian.com लागि 2016 12.30 UTC
अधिकारी Shaun McKennedy पहिलो अधिमात्रा कल 6.39pm मा आउँछ. उहाँले मा sirens उत्तेजित गर्दछ र अधिक rushes 245 लौरेल सडक, एक midsize अपार्टमेन्ट भवन. त्यहाँ अगाडि यार्ड मा एक त्यागेर बच्चा गाडी छ. मानिसको McKennedy रूपमा आफ्नो doorway बाहिर एक chucky को दुलही शर्ट peeps लगाएका, 24, माथिल्लो तलाको rushes.
स्थानीय आगो विभाग र EMT विभाग धेरै मानिसहरू पहिले नै छन्, एक soaking भिजेको टी-शर्ट र जिन्स मा जीवित कोठा तल्ला मा एक 31 वर्षीया मानिसको जस्तो देखिने निर्जीव शरीर वरिपरि hovering. यो अवस्थामा McKennedy छ, 24, उहाँले शक्ति पछिल्लो जुलाई सामेल देखि पटक दर्जनौं मार्फत भएको छ.
"लैरी! लैरी! हाम्रो साथ रहन!"जस्टिन Chase yells, एक म्यान्चेस्टर EMT medic. उहाँले naloxone injects, opioids को प्रभाव उल्टाउँछ कि एक दबाइ, लैरी गरेको नाक अप.
उहाँको शरीर जनाए र आफ्नो आँखा खुला पप. "के छ?"उहाँले सोध्छन्, रङमा पिल पिल बिना.
लैरी इलियट अस्पताल मा आकस्मिक कक्ष जान सहमत, परीक्षण परिणाम आफ्नो अधिमात्रा गर्न नेतृत्व ठ्याक्कै निर्धारण अघि तर यो धेरै सप्ताह हुनेछ. यो त्यो पूरा पहिलो पटक हो, त्यो रात पछि McKennedy बताउँछ. सामान्यतया उहाँले एक दिन लागु पदार्थ को तीन दुई बीच र ग्राम injects; उहाँले मात्र लिए कि साँझ .2 ग्राम, वा "पेन्सिल". उहाँले आफ्नो सहिष्णुता गुमाए किनभने उहाँले overdosed भने उहाँले निश्चित छैन - वा यदि यो fentanyl संग laced थियो - उहाँले बस भन्दा दुई महिना लागि सफा भएको भन्छन्.
यो औषधि प्रवर्तन प्रशासन अनुसार, fentanyl एक कृत्रिम opioid छ 100 पटक थप शक्तिशाली morphine भन्दा, र 30-50 पटक थप शक्तिशाली लागु पदार्थ भन्दा.
"Fentanyl हाम्रो नागरिक मारिरहेको छ के छ,"गवाही मा प्रहरी निक Willard को म्यान्चेस्टर मुख्य गत हप्ता कांग्रेस अघि भन्नुभयो.
मा 2013, म्यान्चेस्टर शहर थियो 14 घातक ज्यादा मात्रा, 7% जो आफ्नो सिस्टम मा fentanyl संग सिकार संलग्न, Willard अनुसार. मा 2015, 69 मान्छे fatally overdosed, 68% कसको fentanyl लिएका थिए.
राज्य तथ्याङ्क कुनै cheery छन्. न्यू हैम्पशायर मा मुख्य चिकित्सा जाँच को कार्यालय मा अधिकारीहरु तिनीहरूले परीक्षण परिणाम प्राप्त गर्न अझै छ भन्न 36 आशङ्का ज्यादा मात्रा, तर तिनीहरूले गन्ती गर्नुभएको 399 घातक अधिमात्रा सिकार हालसम्म, जसलाई दुई भन्दा बढी तिहाई आफ्नो सिस्टम मा fentanyl संग मृत्यु.
"यो मन होइन मारियो Batali,"म्यान्चेस्टर आफ्नो कार्यालय बाट Willard भने, प्रसिद्ध प्रमुख आफ्नो आपूर्ति काटन लागु पदार्थ व्यापारीहरु तुलना. "यी मान्छे बस एक मिक्सर मा फालिएको छन्. तपाईं सिद्ध भन्ने एक झोला प्राप्त गर्न सक्छ र कुनै एक यो देखि मर्न रहेको छ. तपाईं पनि एक झोला प्राप्त गर्न सक्छ [कि छ] सीधा fentanyl र तपाईं मार्न हुनेछ। "
Willard भने म्यान्चेस्टर मा एक हाल छापे समयमा, उहाँले छांछ प्रोटिन संग fentanyl मिश्रण एक बिक्रेता फेला. अर्को डंक त्यो लरेन्स मा एक जफती गर्न नेतृत्व, मैसाचुसेट्स, यस बिक्रेता कथित एक भान्सा ब्लेंडर मा लागु पदार्थ र fentanyl मिश्रण थियो.
सबैभन्दा भाग लागि, भन्यो Willard, म्यान्चेस्टर मा निद्रजनक औषध प्रयोग को कथा देश बाँकी जस्तै ढाँचाको निम्नानुसार. संकट OxyContin जस्तै निर्धारण painkillers को वृद्धि गरेर ushered थियो. एक सस्ता उच्च लागि देख नशेडी प्राय थप खतरनाक फर्केर, अहिलेसम्म एकदम सस्ता, लागु पदार्थ.
यो मोड, उस्ले भन्यो, कहिलेकाँही पछि भयो 2010, Purdue किसानले दबाइ बदल जब यो गाह्रो संग ट्याम्पर बनाउन र उच्च प्राप्त गर्न. मेक्सिकोमा आपूर्तिकर्ता को burgeoning बजार साथ राख्न छिटो थिए, र म्यान्चेस्टर मा नशेडी, जो Interstate नजिकै बस्छन 93, मार्ग 3, मार्ग 81, र मार्ग 9, कुनै समस्या आपूर्ति मा दोहन थियो.
Fentanyl 'हाम्रो नागरिक मारिरहेको छ के छ', म्यान्चेस्टर गरेको प्रहरी प्रमुख भन्छन्. तस्वीर: Alamy
मामिलामा म्यान्चेस्टर लागि बुरा गर्न, DEA एजेन्ट टिम Desmond भन्छन् बुद्धि संकेत गर्छ मेक्सिकन cartels कि, विशेष एल Chapo गरेको सिनालोआ कार्टेल, वृद्धि अफीम उत्पादन छ 50% गत वर्ष देखि र उत्तर-पूर्वी लक्षित गरिएको छ.
Fentanyl पहिलो एक सामान्य शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि रूपमा 1960 मा विकास भएको थियो, र यो अझै पनि नियमित डाक्टर प्रबन्ध छ, सामान्यतया lozenges र पैच को रूप मा, क्यान्सर बिरामीको लागि बारम्बार.
नशेडी दबाइ को निर्धारण प्रकारका दुरुपयोग तरिकाहरू पाएका, को पैच मा चूसने द्वारा, उदाहरणका लागि. तर हालसालै, मेक्सिकन cartels कसरी चीन देखि आवश्यक रसायन आयात गरेर आफ्नै fentanyl बनाउन सिकेका, त्यसपछि अंतरराज्यीय राजमार्ग प्रणालीमा सीमा मार्फत र उत्पादन smuggling, Desmond भने.
संयुक्त राज्य अमेरिका अघि fentanyl समस्या थियो. बीच 2005 र 2007, धेरै 1,000 मान्छे दबाइ देखि मृत्यु, ज्यादातर को मिडवेस्ट मा. को DEA देखि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी अनुसार, ती मृत्यु सबै मेक्सिकोमा एक प्रयोगशाला गर्न लगाया जान सक्छ. एक पटक DEA ल्याब बन्द, को fentanyl महामारी पनि रोकियो.
वरिपरि यो समय, को DEA अझै मेक्सिकोमा एक प्रयोगशाला नयाँ इङ्गल्याण्ड मा महामारी लागि जिम्मेवार लक्षित छैन, Desmond भने. सट्टा, संघीय एजेन्ट र स्थानीय प्रहरी क्षेत्र व्यापारीहरु लक्षित गर्दै छन्. "कहिलेकाहीं हामी सीढी गएर क्रममा खाद्य श्रृंखला को तल सुरु गर्न,"उहाँले भन्नुभयो.
म्यान्चेस्टर मा, Willard जमीन माथि बाट महामारी खतम गर्नु गर्न काम गरिरहेको छ. उहाँले गत वर्ष को गर्मी मा मुख्य बनेपछि, उहाँले आफ्नो दबाइ एकाइ भन्दा गरिएका, र सडक तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न चाँडै व्यापारीहरु पक्रन गुप्तचरहरू आदेश, एक थप राम्ररी मामला निर्माण वा आपूर्ति लाइन अप काम गर्न प्रतीक्षा भन्दा.
उहाँले पनि राज्य र संघीय टास्क फोर्स निर्माण गर्न काम गर्नुपर्छ, ग्रेनाइट हथौडा भनिन्छ, पछिल्लो सेप्टेम्बर थाले जो; अहिले सम्म, उस्ले भन्यो, एकाइ बनाएको छ 77 पक्राउ. उहाँले पनि रिकभरी क्लीनिक को लागि राज्य समर्थन वृद्धि लागि भनिएको छ.
McKennedy दुई प्रतिक्रिया थप अधिमात्रा त्यो रात भनिएको. पहिलो मार्क नाम आफ्नो लेट 20s मा एक मानिस थिए, जो आफ्नो हात मा एक सुई र एक पूर्ण संग एक लुगा घुने ठाउ मा बाहिर पारित, र जान तयार. मार्क अस्पताल गर्न EMTs साथ दिनु कम इच्छुक थियो.
"तपाईं मर्न चाहनुहुन्छ?"Chase आग्रह.
"कसले बकवास यो जीवन बाँच्ने चाहनुहुन्छ?"मार्क गरेको बयान, भन्यो Chase, आत्महत्या ideation छ, जो EMTs जसरी अस्पताल उसलाई लिन आवश्यक छ भन्ने हो. अस्पतालमा, मार्क फिर्ता आफ्नो लागु पदार्थ लागि McKennedy आग्रह.
अर्को कल उनको प्रारम्भिक 30s मा एक महिला को लागि थियो. डन Marie एक साथीको अपार्टमेन्ट मा overdosed. यो उनको पुनर्जीवित गर्न naloxone दुई खुराक लिएर. उनको मित्र दुई छोराछोरी छन्. तिनीहरू एक कोठा अर्को ढोका मा एक रंग पुस्तक मा वर्णमाला बाहिर वर्तनी अभ्यास.
अन्य अधिकारीहरू चौथो अधिमात्रा कल प्रतिक्रिया McKennedy EMTs एक भान्सा चक्कु संग आफ्नो जीवन लिन प्रयास गर्ने एक दुर्व्यसनी गर्न उपस्थित मदत गर्दा. उहाँले अघिल्लो अधिमात्रा देखि McKennedy पहिचान. "प्रमोदवनमा अर्को दिन,"उहाँले अधिकारी ढोकाबाट हिंडे रूपमा भने.
शान्त को एक क्षण मा, McKennedy एक ट्राफिक स्टप संग सहायता अधिकारी मार्क aquino. Aquino एक दबाइ पहिचान विशेषज्ञ छ. यो नशेडी पहिचान गर्न गाह्रो प्राप्त गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो. लागु पदार्थ पत्ता लगाउन सजिलो छ, प्रयोगकर्ताको pupils सानो र पिन-जस्तो प्राप्त. "Fentanyl pupils प्रतिबन्ध छैन,"उहाँले भन्नुभयो. "तिनीहरूले सट्टा टाउको निहुराउनु,"उहाँले बताउनुभयो, आफ्नो छाती आफ्नो चिउँडो गिर.
मा 10.30, McKennedy कागजी कार्रवाई भर्नका लागि कलको लागि लेखा विभाग फर्के. म्यान्चेस्टर अर्को "लगातार" शिफ्ट, तिनले निष्कर्षमा. "केहि पनि साधारण बाहिर।"
← गाँजा मौखिक स्मृति हानि पुर्याउन सक्छ 10 मुद्रा बचत लागि सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग को →